लक्ष्य (छैन) को रिङ्क मा चोरी! | Holmbygden.se
पोस्ट 10 जनवरी, 2014 द्वारा Holmbygden.se
बरफ रिङ्क रातो गर्नुपर्छ प्रतीक्षा गर्दा अब सिद्ध बरफ संग चर्च खाडी मा एक uppskottad रिङ्क छ!
लक्ष्य अब rediscovered छ! Luckily, यो चोरी भएको थिएन, तर कहिले काँही नियन्त्रण परिस्थितिमा उधारो.
Anund Manor स्कूल मा målburarna एक चोरी गरेको देखिन्छ! यो दुःखी समाचार स्कूल मा एक यात्रा समयमा हिजो पत्ता थियो. केवल cages एक, माथि मा, त्यसपछि बाँकी थियो. त्यहाँ जब गायब कुनै नजिक सङ्केत, तर सबै भन्दा अधिक संभावना डिसेम्बर-जनवरी हालै.
यस बारे केहि थाह जो कोहीले छ?!
तल टिप्पणी वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!
Sundsvall नगरपालिका Holm थप छैन फ्लश गरे
अन्य वर्ष कसैले अचानक हटाइएको रिङ्क जानकारी म Anundgård बिना Sundsvall नगरपालिका लिए. यसलाई स्पष्ट अन्यत्र थप आवश्यक. गत वर्ष, तिनीहरूले कुनै पनि बरफ फ्लश छैन सोच, तर दबाबको पछि #ShepherdsHut तिनीहरूले जसरी पनि यसलाई गरे.
यस वर्ष, नगरपालिका फेरि सबै Holm मा एक बरफ रिङ्क व्यवस्थित गर्न योजना बनाएका थिए छैन. HBU अब फेरि Sundsvall नगरपालिका संग सम्पर्क मा भएको र हामी पनि हाम्रो साथ यो काट्नु पर्छ भनेर घृणा मुनि यो छ विचारमा घोषणा गरेको छ. कर पैसा पनि Holm बासिन्दा द्वारा र यो शायद कुनै पनि सेवा देहात फर्केर जान जस्तो छैन भनेर निराशाजनक छ.
HBU अहिले यो एउटा समाधान तय गरेको छ. विवरण nailed छैन, तर छोटो, यो नगरपालिका कम्तिमा तयार बरफ बनाउन सुनिश्चित अर्थ. त्यसपछि हामी यसलाई चलिरहेको राख्न हुनेछ. यस नगरपालिका अन्य ठाउँमा आवश्यक छैन भनेर एक समाधान, तर स्पष्ट बस हाम्रो बरफ निर्लज्ज प्राप्त गर्न एक आवश्यकता. को रिङ्क छिट्टै निस्तब्धता सुरु हुनेछ!
को रिङ्क हिउँदमा सम्भव बनाउन HBU गरेको सदस्यहरूलाई धेरै धन्यवाद!
त्यसपछि रिङ्क को मर्मतका लागि अनुदानको व्यवस्था हाम्रो सङ्गति लागू गर्नुपर्छ, हामी हाम्रो आवेदन हाम्रो सदस्यहरु पहिचान हुनुपर्छ. तसर्थ, हामी यो Holm मा एक बरफ रिङ्क छ गर्न अनुरोध पछि के धेरै Holmbor छ देखाउन सक्छ. HBU तत्संबंधी ठूलो हालै HBU अगाडि सामेल गर्ने सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु 2014 र एकै समयमा हामीलाई यस वर्ष एक बरफ रिङ्क गर्न अनुमति दिन्छ!
समर्थन रिङ्क र HBU तपाईंलाई! केवल एक femtiolapp लागि HBU सदस्य बन्ने बारेमा थप जान्न.
(“अब सामेल” भेटिए “सम्पर्क” मेनुमा।)
रिङ्क डिस्को पनि 2014?
एक बरफ-डिस्को यो जाडो संग गत वर्ष गरेको लोकप्रिय घटना बारम्बार HBU योजना. संभवतः पछि “पब साँझ” trubadur-माइक संग. हामी यस बारे थप जानकारी फर्कने हुनेछ. पढ्न र गत वर्ष गरेको बरफ-डिस्को बाट राम्रो तस्वीर हेर्न